MYU SHADAN: KNPP နှင့် အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲဖြစ်
ကျော်ခ| June 29, 2012 | (ဧရာဝတီ)
အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပဏာမ သဘောတူညီချက်ပြုလုပ်ထားသော ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစိုးရတပ်ဖွဲ့များ ယမန်နေ့က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ကယားပြည်နယ် မော်ချီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဘွာဒိုကျေးရွာအနီး မော်ချီးမြို့နှင့် တောင်ငူမြို့သို့ ဆက်သွယ်ထားသော ကားလမ်း ဟောင်း အနီးတွင် KNPP အမှတ် ၁ တပ်ရင်းနှင့် အင်အား ၈၀ ကျော်ပါဝင်သော မော်ချီးမြို့နယ် အခြေစိုက် ခြေမြန်တပ်ရင်း(ခမရ) ၅၃၀ တို့ တနာရီခန့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း KNPP အတွင်းရေးမှူး ၁ ခူးဦးရယ် က ပြောပြသည်။
“သူတို့အကြောင်းပြတာကတော့ တောင်ငူ-မော်ချီး ကားလမ်းကို တိုင်းတာဖို့အတွက် သွားတာလို့ပြောတာပဲ၊ ဒါပေမယ့် စစ်တပ် ကတော့ ဒါမျိုးအလုပ်တွေ လုပ်နေကြမဟုတ်ဘူးလေ၊ သူတို့က ကျွံပြီးဝင်လာတော့ ကျနော်တို့ တပ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ကြတာပါ”ဟု ခူးဦးရယ် ကပြောသည်။
တိုက်ပွဲကြောင့် အစိုးရတပ်ဘက်မှ ၅ ဦး ကျဆုံးကြောင်း KNPP ဘက်မှပြောဆိုသော်လည်း ဧရာဝတီက သီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ သို့သော် နယ်မြေစိုးမိုးမှုအရ ယင်းတိုက်ပွဲတွင် အသာစီးရခဲ့သည်ဟုလည်း KNPP က ဆိုသည်။
ခမရ ၅၃၀ နယ်ကျွံ လှုပ်ရှားလာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားမီ KNPP ခေါင်းဆောင်များက ပြည်နယ်အဆင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး တင်စိုး ထံ အကြောင်းကြားခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့တပ်ရင်းများ မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
နှစ်ဘက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ “ဒါမျိုးနောက်ထပ် ထပ်မံမဖြစ်ပွားဖို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန်းဌေးကိုတော့ ဖုန်းနဲ့ တိုက်ရိုက် အကြောင်းကြားပြီးပါပြီ”ဟု ခူးဦးရယ်က ပြောသည်။
“လှုပ်ရှားမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ တပ်တွေက မလိုအပ်ဘဲနဲ့ လမ်းကြောင်းကလွဲရင် မသွားလာဖို့ အဲသလိုတော့ အကြမ်းသဘောတူ ထား တာတော့ ရှိတယ်။ ဒီတိုင်း ထိန်းသိမ်းလာတာ ၃ လကျော် ၄ လလောက်ရှိပြီ ပေါ့ဗျာ၊ အခုကျနော်တို့က အကြောင်းကြားတာကို သူတို့တပ်တွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲက ဖြစ်သွားတာပဲ”ဟု ခူးဦးရယ်က ပြောဆိုသည်။
Posted by zau myu ong Lawhkawm at 11:24 PM
ATM ဘဏ် စက်ခိုးရန်ကြိုးစားသူ ဗြိတိန် ၂ ဦး ထိုင်းရ...
မြစ်ကြီးနားတွင် ဦးဘရန်ရှောင် အရေးငြိမ်းချမ်းစွာဆန...
KALAI KAU GA
NDAK ရဲဘော်ဟောင်းတစ်ဦးမှ မိဘပြည်သူများထံသို့ ပန်ြ...
SLG. LAHTAW BRANG SHAWNG HPE TARA RUNG SHAW
SLG. LAHTAW BRANG SHAWNG HPE HKRUM LU NA MATU
RAWANG LAILI LAIKA HTE HTUNGHKING HPUNG NINGBAW LA...
KNO - KIA HKRUM ZUP BAWNGBAN HPAWNG
HKYAK HKYAK RA GADAWN NGA
MYEN (10) HKRAT
DAP BA (5) GINRA NI HTA LAJA LANA KASAT
ဆရာဝန် ၆ ဦးနှင့် WFP ၀န်ထမ်း ၆ ဦး ရခိုင်၌ ဖမ်းဆီ...
“တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး” အတွက် Burma ဟု သုံးနှုန်းခြင်...
လိင်အင်္ဂါ ၂ ခုနဲ့ နေပြည်တော်က လူသား
KIO - KNO N DAU LAIKA
PHOTO SLIDESHOW CREATOR ( KEY )
ကချင် ဒုက္ခသည်စခန်းများ အရေးပေါ်အကူအညီ လိုအပ်နေ
AUSTRALIA WAGGA WAGGA MARE HTA JINGHPAW LAIKA SHAR...
TA HKAW HKA WAN JAN MAKAU KAW GASAT
၀ါရှောင် နှင့် ကချင် ပြည်နယ် အတွင်း ရှိ ဆည်များ ကိ...
မူဆယ်မြို့နယ်၊ မန်လုံလမ်းတွင် ရွာသားများ ပစ်ခတ်သတ်...
မြန်မာအစိုးရ စစ်ကြောင်းများ ရွာအတွင်းမိုင်းထောင်
ဖားကန့်မြို့နယ်အခြေစိုက် KIA တပ်ရင်း ၆ ၏ မူးယစ်ဆေး...
HPAKANT TAMAHKAN MAKAU KAW GASAT
ဦးတေဇ၏ ထူးကုမ္မဏီက ၉ တန်းကျောင်းသားလေး၏ ကျောက်စိမ်...
ဘန်ကောက်မြို့က အမွေးအမှင်ထူတဲ့ ကလေးမ – The World’s...
Jinghpawland jade 景颇大地翡翠
ကချင်ပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသနေ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများ ...
wunpawng shayi(JINGPO GIRL DANCE NOBODY )
JINGPO GIRL DANCE NOBODY
လိင် ဆက်ဆံ မှု ဦးစား ပေး ချစ်စခန်း ဖွင့် မှု ထွန်းက...
HPAW YU U
MUNG NOI HKU KAW DUNG (260 NI HTIM GAP
DUNG (3) NI SADUNG HKA RUM MAKAU KAW MYEN HTE GASA...
ဦးအောင်သောင်း လွှတ်တော်ထဲက ထွက်မှာလား
June 22 (သတင်းတို)
နိုင်ငံရေးချစ်သူ အမှတ် (၈)
MYEN A DINGHKU MAJAN SHAZIM MASA HTE MUNGDAN GALAI...
ဖားကန့် ရေလွှမ်း၍ ၁၆၂ ဦး အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်
BB FLASH SCREEN RECODER ( Key )
“မြန်မာပြည်မှာ တက္ကသိုလ်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ အနှစ်သာရေ...
TSAWM HTAP WUNPONG SHAYI (1)
TSAWM HTAP WUNPONG SHAYI (2)
NAM YA HKA KAU KAW MYEN HPYEN HPUNG NI HPE HKAP GA...
NAM MAW MAKAU KAW GAP MYEN (7) HKRAT
ခန္တီးရဲရဲ့ လျှာဖြတ်မှုအကြောင်း NLD ရုံးမှာ ဖွင့်ချ
“ထိတွေ့ဆက်ဆံ” နေတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ … ဘယ်လဲ
အမည်မသိ ဆီများကို သတိထားပါ တဲ့
SLG. BRANG SHAWNG HPE MYEN NI RIM ADUP ZINGRI
KIA DAP BA (4) GINRA SHIGA NI
FUNNY PHOTO ; )
ENGLISH - MYANMAR TYPING TUITORka ai ten : 8:51 PM...
ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ပြန်လာရေး အစိုးတပ်များ ဆု...
HTAP HTUK AI NINGMU
က၀ါးပန်ရွာအား ဖျက်သိမ်းပြီး အတင်းအဓ္ဓမ ရွှေ့ပြောင်းခ...
HKA MUT HKA POST HPE MYEN HPYEN NI YEN KAU
DUNG (36) GINRA HPUNG GAN KAHTAWNG KAW GASAT
ခလရ(၁၄၂) တပ်ရင်းဌာနချုပ် တိုက်ခိုက်ခံရ
KIA တပ်သားတစ်ဦး ခမရ(၄၁၆) တပ်စခန်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခ...
MYEN SPY (3) LU RIM
HPYEN YEN DABANG NA SLG. LAHTAW BRANG SHAWNG HPE R...
ငါ့ကိုမကြောက်ဘူးဆိုရင် ဖတ်ကွာ...။း)
UWSA နှင့် SSA တောင်ပိုင်း တင်းမာမှု ပြေလည်
ပေါ်တာအသုံးပြု ၊ ထိုးစစ်ပြင်ဆင်
PANG SAI,NAW GU Gast Poi Hta MHH (2)Hkrat(1)Hkala
Who can do this?;;D
တန်းတူမှုလည်းရှိ၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်လည်းရှိ ၊ ဒ...
အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး နည်းလမ်းသုံး ဖြေရှင်းရန် SSA...
ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု တနှစ် ဆက်ထားရန် အမေရိကန်အမတ်များ တိ...
ဂျာမဏီ ကားကြော်ငြာ အတွက် မိုးဟေကို
MYEN BALIK DAP HPE SA HTIM GASAT
NAW GU KAW DUNG (38) HTE MHH NI JAWM GAP
MYEN HTE BAWNGBAN NA KIO/KIA DAT KASA NI MAIJA YAN...
ဖားကန့်ပြည်သူ၏ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ကာကွယ်ပေးနေသော KIA တပ...
N PAWN BUM KAW MYEN (2) SI